न्यातपोल पुनर्निर्माणमा श्रमदान – Highlights Tourism
आफ्नो सम्पदा आफै बनाउँ
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ५ तमारी (तौमढी) स्थित ३१८ वर्ष पुरानो विश्व सम्पदासूचीमा सूचिकृत न्यातपोल (पाँचतल्ले) मन्दिरको छाना जीर्णोद्वारको काम भइरहेको छ । त्यसका लागि भक्तपुरका स्थानीयले श्रमदान गरिरहेका छन् ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पले पाँचौं तल्लाको छानोमा क्षति पुर्‍याएपछि भक्तपुर नगरपालिकाको ६५ लाख १३ हजार ३५८ र चन्दा सङकलन करिब ११ लाख रुपैयाँमा पाँचवटै छानाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । यही क्रममा भक्तपुरका स्थानीयले श्रमदान गरेका हुन् ।
श्रमदानमा कोही छानामा चढेर टायल मिलाइरहेका छन् भने कोही माटा मुछेर डल्ला बनाउँदै छन् । कोही ढुंगा ओसार्दै छन् भने कोही अन्य काममा जुटेका छन् ।
मन्दिर जीर्णोद्धार समितिका अध्यक्ष केशज तमखुले बुधवारसम्ममा करिब ३ हजार व्यक्तिले मन्दिर पुनर्निर्माणमा श्रमदान गरिसकेको बताए । विभिन्न टोलबाट मानिसहरु स्वस्फूर्त रुपमा मन्दिर बनाउन सहभागी हुँदै आइरहेका छन् ।
यसको निर्माण १८औँ शताव्दीमा मल्लकालीन राजा भुपतिन्द्र मल्लले गराएका हुन् । यस मन्दिरमा पाँच तल्लाहरू रहेका छन् । यस मन्दिर तान्त्रिक शक्त स्वरुपको रुपमा पुजिने सिद्धीलक्ष्मीको हो । यो मन्दिर वि.सं. १७०१ देखि १७०२ ताका निर्माण गरिएको बताइन्छ ।
तस्बिरहरु: रत्न श्रेष्ठ/रासस
Previous article नेपालमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या ३० पुग्यो
Next article स्वास्थ्य सावधानीका साथ रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको तयारी
कुमारी मन्दिर परिसर
फर्किँदै रानीपोखरीमा वैभव